“बालिका बधु”कि अभिनेत्री प्रत्युषाको आत्महत्याले बिचलित मधु ले पनि गरिन आत्महत्या ! - inaruwaonline.com
“बालिका बधु”कि अभिनेत्री प्रत्युषाको आत्महत्याले बिचलित मधु ले पनि गरिन आत्महत्या !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २६, २०७२ समय: १४:०३:२३
२६ चैत्र, एजेन्सी। अघिल्लो साता आत्महत्या गरेकी बलिउड अभिनेत्री प्रत्युषा बेनर्जीकी एक फ्यानले समेत आत्महत्या गरेकी छन् । प्रत्युषालाई अत्यन्त मन पराउने भारतको छत्तीसगढ राज्यकी मधु महानन्दले झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् ।दुई वर्षको बालककी आमाले मधुले बालकलाई छेउमै राखेर आत्महत्या गरेको भारतीय सञ्चार माध्ययमले जनाएका छन् । मधुको हत्याका सम्बन्धमा छत्तीसगढ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीले उनका श्रीमान् नकुल महानन्दसँग बयान समेत लिएको छ ।बयानका क्रममा महानन्दले बधु प्रत्युषाको फ्यान भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार मधुले प्रत्युषाले आत्महत्या गरेपछि पटकपटक उनको कुरा गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् । मधु र नकुलले सन् २०१२ मा प्रेम विवाह गरेका थिए । मधुका श्रीमान नकुलले प्रत्युषाको मृत्युपछि मानसिक रुपमा मधु दुखी भएको खुलासा गरेका छन् ।
मधुले प्रत्यूषाको खुब प्रशंसा गर्ने गरेको बताउदै नकुलले प्रत्युषाको मृत्युले मधुलाई धेरै पीडा भएको महसुस आफूले समेत गरेको बयानका क्रममा बताए । प्रेमी राहुल सिंहसँगको खटपटपछि ‘बालिका बधु’की अभिनेत्री प्रत्युषाले अघिल्लो हप्त आफ्नै घरमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन । जुमएनपीबाट